Nosamborina tao an-trano nanomboka ny 20 septambra lasa teo, ny mpitarika ny MRC dia ahiahiana ho "mpitondra tetik'asa fikomiana hanonganana ireo andrimpanjakana". De facto napetraka am-ponja trano, satria ny mpitandro ny filaminana ...
Valin'ny Dan Gertler sy Banky Afriland Voalohany: fitarainana any Paris
Ilay mpandraharaha israeliana sy ny banky kameroney, nampangain'ny ONG Global Witness tamin'ny volana jolay noho ny fanao kolikoly, samy nametraka fitoriana fitenenan-dratsy tany Paris. Natomboka ny fifanolanana ara-pitsarana.…
Nolavin'ny Fitsarana Cassation ny fampiakarana raharaha nataon'i Félicien Kabuga izay mihantsy ny famindrana azy ho amin'ny mekanisma an'ny Firenena Mikambana, monina ao Tanzania. Ity fanapahan-kevitra ity dia manokatra ny làlana amin'ny fitsarana amin'ny ho avy izay ahiahiana ho mpamatsy vola ...
Ny tatitra farany nataon'ny kongresy indray dia nanondro an'i Boeing, mpanamboatra azy
Fianjerana Etiopiana 737 Max: ny Kongresy amerikana indray no manome tsiny ny vaovao be momba an'i Boeing miafina amin'ireo mpanamory fiaramanidina, fifanolanana misy ifandraisany amin'ny mpanara-maso amerikana…
Eric Dupond-Moretti: nambara ny ady teo amin'ny mpitandrina ny tombo-kase sy ny mpitsara
Mangataka ny fanokafana famotopotorana izy ary mamoaka feo toy ny fikotrokotroka mankany amin'ny Fampanoavana Nasionaly: ny minisitry ny fitsarana Eric Dupond-Moretti dia nanafika mpitsara telo. Fangatahana ho mariky ny tsy fahatokisana eo amin'ny ...
CPI: Inona no azon'i Fatou Bensouda atao amin'i Donald Trump?
Raha nanao lisitra mainty ny mpampanoa lalàna ICC taorian'ny nanokafana fanadihadiana momba ny heloka an'ady sy ny heloka bevava atao amin'ny olombelona any Afghanistan, dia manjaka ao Hague ny ahiahy. Inona avy ireo fanafody ...
Fanavakavaham-bolonkoditra: John Boyega, kintan'ny "Star Wars", niverina niverina
Mpanohana mafana fo ny hetsika Black Lives Matter, ilay mpilalao anglisy-ganeana John Boyega dia nanambara ny fiziriziriny tao amin'ny toerana fanaovana dokam-barotra nataon'i Jo Malone sy tao amin'ny afisy amin'ilay sarimihetsika "Star Wars" natao ho an'ny tsena sinoa. Tsy maintsy…
Kamerona: Inona no raketin'ny antontan-taratasy fanadihadiana momba an'i Edgar Alain Mebe Ngo'o?
Kaomisiona retro, valopy, fiara lafo vidy, tranobe… Jeune Afrique dia nanambara ny antsipirian'ny antontan-taratasin'ny minisitra teo aloha, natolotra ny fitsarana heloka bevava manokana tamin'ny 26 aogositra noho ny fanodinkodinam-bolam-panjakana. The ...
Etazonia: Hysterectomies mpanararaotra no ampiharina ao amin'ny fonja tsy miankina any Georgia!